Prof Lighters Jet Flame Blowtorch Blue Jet Flame Mini torch Blow torch | Dukaanka Madaxa ee Dragons
Bogga ugu weyn → Prof Nalalka
Prof Lighter waa ...
… iyo ololka la hagaajin karo ee baaquli galaaskaaga, baarka birta ah, banjarka quartz, tuubo dhalada ah ama tuubada sigaarka, ka hel Prof Lighter ama Prof Lighters -kaaga internetka Dragons Head Shop Ltd dukaan sigaar cabba oo UK ku yaal; bixiyeyaasha qalabka sigaarka, sahayda iyo qalabka sigaarka
Nalalka Prof Jet wuxuu bixiyaa waayo-aragnimada ugu dambeysa ee iftiiminta oo leh olole aad u dhakhso badan, joogto ah, oo xoog leh. Shaqadan farshaxanka oo tayo sare leh, oo aad u waarta ayaa si sax ah loogu farsameeyay amniga iyo waxqabadka ugu badan. Waxay ka muuqataa hawl quful-ku-ilaalin oo aan carruurta u adkaysan karin oo xaqiijineysa nabadda maanka ee dadka waaweyn iyo carruurta si isku mid ah.
Fiiri dhammaan 14 mm Dheddig 18 mm Lab Blowtorch khafiif ah Olol diyaarad buluug ah galaas borosilicate Daryeelka maqaarka ee CBD dab dam GADP General adabtarada galaaska Olol Jet fududeyn Nalalka & Ciyaaraha imaatinka cusub prof Muraayadaha Bedelka Tooshka shidan dabayshu
Profaalka Wotofo M Tube Beddelka PCTG Dheer